व्यवसायहरूका लागि Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रस्तुत गर्दै
Semalt यसको अग्रणी एसईओ एजेन्सी हुनको आफ्नो मिशनमा जारी रहन्छ जुन सब भन्दा सस्तो मूल्यमा सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ। हाम्रो नयाँ समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड एक तरीकाले हामी डिजिटल मार्केटिंग दुनिया सबै सही तरीकाहरूमा क्रान्ति गर्न सक्दछौं।
अब, यदि तपाईंले सुन्नुभएको छैन भने Semaltयहाँ छिटो परिचय छ।
Semalt एक पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो जसले असाधारण SEO, वेब विकास, र व्यवस्थापन सेवाहरू प्रदान गर्दछ। भर्खर हामीले, हाम्रो DSD प्लेटफर्मको परिचयको साथ हाम्रो खेललाई चलायौं, हामीलाई कुनै पनि र हरेक वेबमास्टर र मार्केटरको लागि उत्तम साझेदार बनाउँदछ।
हाम्रो DSD प्लेटफर्म यति अचम्मको छ कि कोहीले पनि सजिलैसँग आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्दछ केवल per १० प्रति डोमेनको साथ। यसको मतलब यो हो कि तपाईको सेवाहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईको प्रतिस्पर्धाले अन्य महँगो प्लेटफर्महरू जस्तै उबर्सगजेट र आह्रेफ्सबाट अधिक किफायती मूल्यमा प्राप्त गर्दछ।
अब तपाईंले सोचिरहनु पर्छ यदि तपाईं DSD मा उस्तै गुण पाउनुहुन्छ भने। हो, तपाईं गर्नुहुनेछ, तर हामी बुझ्दछौं कि तपाईंले हाम्रो शब्द मात्र लिनुहुन्न, त्यसैले हामीले हाम्रो क्रान्तिकारी उपकरणको अन्वेषण गर्न मद्दतको लागि यो लेख डिजाइन गरेका छौं। अन्तमा तपाईले केवल हाम्रो उपकरणलाई माया गर्नुहुने थिएन, तर तपाईले वेबसाइट निर्माण गर्न कत्ति सजिलो हुन्छ देख्नुहुनेछ जुन ट्राफिक को चित्रण गर्दछ।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड उपकरण प्रयोग गर्दै
उपकरणले तुरून्त दर्साउँछ कि कसरी प्रयोगकर्ता-अनुकूल यो तपाइँले साइन अप गर्ने बित्तिकै। सम्भव भएसम्म तपाईको अनुभवलाई मित्रवत अनुकूल बनाउन तपाईसँग धेरै साइन इन/लगईन विकल्पहरू छन्। पहिले, तपाई Semalt को लागी एक उपयोगकर्ता नाम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईको DSD खातामा साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको गुगल वा फेसबुक खातामा लिंक गरेर। अन्य साइटहरू जस्तै लगइनका लागि यी विकल्पहरू प्रयोग गर्दछ, हामी तपाईंको फेसबुक वा गुगल खातामा भण्डार गरिएको जानकारी लिनेछौं र यसलाई तपाईंको Semalt खातामा लागू गर्नेछौं। प्रयोगकर्ताहरूको लागि जुन त्यो विकल्पसँग सहज छैन, तपाईं Semalt मा खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको जानकारीलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो तपाईंलाई उचित देखिन्छ।
एकचोटि तपाईंले सफलतापूर्वक खाता सिर्जना गर्नुभयो, तपाईंलाई चार महत्त्वपूर्ण टुक्राहरूद्वारा स्वागत गरिनेछ।
मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड
पहिलो तीन आईटमहरू एकदम सीधा छन् र पत्ता लगाउन सजिलो छ। यद्यपि, यहाँ प्रत्येक टुक्राको कार्यको संक्षिप्त विवरण छः
खाता बार: यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग तिनीहरूको खाता जानकारी परिवर्तन गर्न र डाउनलोडहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
भाषा विकल्प: यो बटनले पृष्ठमा पाठको भाषा एघार विभिन्न भाषाहरू मध्ये एकमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्: यसले Semalt ग्राहक सेवा प्रतिनिधिलाई सचेत गराउँछ कि एक प्रयोगकर्ता संकटमा छ। तपाईंले यो बटन क्लिक गर्नुपर्दछ यदि तपाईंलाई कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ कि तपाईंलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
यी विकल्पहरू कुनै पनि सेवामा तपाईं DSD मा अप्ट इन उपलब्ध छन् किनभने यो मौलिक छ कि तपाईंसँग यी विकल्पहरू तपाईंको डिस्पोजलमा छन्। तपाईको प्रोफाइलमा लग इन भएपछि तपाईले आफ्नो स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने कुनामा यी विकल्पहरूको पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ, तर यो सावधानीपूर्वक राखिन्छ ताकि यसले तपाईंलाई विचलित गर्दैन।
अन्तिम सेक्सन केहि DSD को कोर विचार गर्दछ। वास्तवमा, यो अन्तिम खण्डको नाम हो: समर्पित SEO ड्यासबोर्ड। प्रयोगकर्ताहरूले यस सेक्सनलाई लुकाउन वा प्रदर्शन गर्न सक्छन् पृष्ठको माथिल्लो बायाँ कुनामा तीन रेखा ग्राफिक क्लिक गरेर। यो विकल्प टास्क गर्न यो उपयोगी छ, त्यसैले यो काम गर्दा तपाइँ विचलित हुँदैन।
हाम्रो समर्पित SEO ड्यासबोर्ड अझ आठ महत्वपूर्ण उप-सेक्सन मा तोड्न सकिन्छ
धेरै परियोजनाहरू एकैचोटि चलाइरहेका प्रयोगकर्ताहरूले यो ट्याब क्लिक गर्न सक्दछ प्रत्येक कार्यको बीचमा द्रुत रूपमा सार्न। यो एक अद्भुत सुविधा हो किनभने धेरै परियोजनाहरु मार्फत नेभिगेट गर्न धेरै सजिलो भयो, हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा फरक। अब तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट अनुकूलन गर्न अधिक समय छ। हाम्रो उपकरणले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धामा नजर राख्न पनि अनुमति दिन्छ। त्यो पुरानो भनाइ जस्तो, तपाईंको साथीहरू र तपाईंको शत्रुहरूलाई नजिक राख्नुहोस्।
यहाँ छ कि कसरी माथिको सूचीमा क्लिक गरेर वेबसाइट थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई गर्नुपर्ने सबै ठूला निलो बटन क्लिक गर्नुपर्दछ, क्वेरीमा वेबसाइट डोमेन नाम टाइप गर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। यो यति सरल छ। तपाईं पाठ अपलोड वा पठाउन सक्नुहुनेछ जब तपाईं बहु साइटहरूको मोनिटर गर्ने योजना गर्नुहुन्छ। यसले तपाईंको काम सजिलो बनाउँदछ किनकि तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक वस्तु सबमिट गर्न आवश्यक पर्दैन। तपाईले महत्वपूर्ण कुञ्जी शब्दहरूलाई स्लाइस बटनमा टाइप गरेर समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले डोमेन समावेश गर्नुभयो भने, तपाईं पछाडि बस्न सक्नुहुन्छ र बाँकी हाम्रो प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नुपर्ने भनेको तल सूचीकृत बिभिन्न वस्तुहरूमा जानुहोस् र महत्त्वपूर्ण जानकारी फेला पार्नुहोस्।
हाम्रो ड्यासबोर्डले दर्शकहरूलाई कार्यक्रममा लागू गरेका सबै परिणामहरूको एक सिंहावलोकन दिन्छ सबै परिणामहरूको अधिक विस्तृत दृश्य दिन्छ। एकै ठाउँमा तपाईंको सबै परिणामहरू हेरेर चाँडो पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ कुन कुन डोमेनहरूको सब भन्दा ठूलो मौका छ, जसलाई तपाईं त्यसपछि केही कार्य कार्यान्वयन गर्दा तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको DSD ड्यासबोर्डसँग एक विकल्प छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई परिणामहरूमा कुञ्जी टुक्रा गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंलाई अधिक जानकारी दिँदै।
ड्यासबोर्ड कसरी संचालन गर्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न यहाँ एक प्रत्यक्ष उदाहरण छ। हामी तपाईंको अनौंठो Semalt DSD उपकरण प्रयोग गर्दैछौं र तपाईं एक समाचार संगठनको लागी काम गरौं। तपाईं समाचार उद्योगमा एबिडी, एनबीसी, र फक्सलाई समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डमा अख्तियारकर्ताहरूको डोमेन टाइप गर्नुहुन्छ र प्रत्येकमा समाचार शब्द विभाजन गर्नुहोस्। यस पाठ मुनि, तपाईं DSD संग हाम्रो विश्लेषणबाट परिणामहरू फेला पार्नुहुनेछ। हामी यो सिक्न सक्षम हुन्छौं कि फक्सले उनीहरूको लक्षित कुञ्जी शव्दहरूमा धेरै जग्गा हराइसकेको छ जबकि एबीसी र एनबीसी सकारात्मक शब्दशब्द खण्डमा ट्रेंड गर्दैछ। यदि तपाईं यस बजारमा यी "ठूला कुकुरहरू" सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं दुई फरक-फरक तरिकामा यस विश्लेषणमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम, यसले तपाईंलाई चीजहरू देखाउँदछ यदि तपाईंले यस मार्केटमा सफल हुने योजना गर्नुभयो भने के गर्नु हुँदैन। दोस्रो, यसले तपाईंलाई पूँजीकरण गर्ने क्षेत्रहरू देखाउँदछ यदि तपाईं यस बजारमा सफल हुने योजना गर्दै हुनुहुन्छ।
खोजी ईन्जिन नतीजा पृष्ठ (SERP) परिणामहरू सन्दर्भ गर्दछ जब तपाई गुगल खोज प्रदर्शन गर्दा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले SERP मा क्लिक गर्नुभयो भने, ड्रप-डाउन मेनू तीन भिन्न विकल्पहरूको साथ देखा पर्दछ, अर्थात्:
शीर्षमा कुञ्जी शव्दहरू: यसले तपाइँको वेबसाइट वा डोमेनलाई तपाइँ तपाइँको कोर सर्च शब्दसँग र्याँकको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ र कसरी त्यसलाई वितरित गरिन्छ।
उत्तम पृष्ठहरू: यहाँ, तपाईंले वेबसाइटमा कुन पृष्ठहरू शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरू र उनीहरूको हालको क्रमशः पत्ता लगाउनुहुनेछ।
प्रतिस्पर्धीहरू: तपाईंले सिक्न सक्नुहुनेछ कि अन्य वेबसाइटहरूले तपाईंले हालै राख्नु भएको कुञ्जी शब्दहरूको साथ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्दछ।
हाम्रो वेबपृष्ठ विश्लेषक सुविधा प्रयोगकर्तालाई धेरै एसईओ कोटिहरूमा आधारित एक अनुकूलन स्कोर दिन्छ। वेबपृष्ठ दिन सकिने उच्चतम अंक १०० हो, र तपाईको स्कोर जति बढी छ, उत्तम छ।
तल ABC.com को अडिट छ। त्यो रिपोर्टमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि उनीहरूले १०० मध्ये scored२ स्कोर बनाए। तलको छविले कुञ्जी क्षेत्रहरू पनि देखाउँदछ जुन हामी वेबपृष्ठको विश्लेषण गर्छौं। हामी संग छ:
यदि तपाईं ती कुनै पनि बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंलाई सीधा त्यो खास परिणाममा लगिनेछ ताकि तपाईं अझ गहन विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको पृष्ठमा त्यो स्कोर किन छ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। तल चित्रित रूपमा
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यस प्रयोगकर्ताले चेतावनी ट्याबमा क्लिक गरेको थियो र मुद्दाहरूको सूचीमा लगियो Semalt को DSD एबीसीको पृष्ठमा फेला पर्‍यो। अब तपाईंलाई थाहा छ के तपाईंलाई पहिलो पृष्ठमा श्रेणीकरणबाट रोकिरहेको छ, ताकि तपाईं केवल पृष्ठ तल चलाउन सक्नुहुन्छ र फेला पारिएको प्रत्येक मुद्दाको समाधान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं सामग्री ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन् यसको ड्रप-डाउन मेनूमा।
पृष्ठ विशिष्टता जाँच
वेबसाइट विशिष्टता जाँच
दुबै यी विशिष्टता जाँचहरू अनिवार्य रूपमा समान कार्य गर्दछ; तिनीहरूले तपाइँको वेबपृष्ठ वा वेबसाइटमा सामग्री विश्लेषण गर्छन् कि कसरी अद्वितीय छन् र तपाइँ तपाइँको कुञ्जीशब्दहरू मार्फत कसरी स्कोर गर्नुहुन्छ। यद्यपि, तिनीहरूले यो विभिन्न तरीकाले गर्दछन्।
जब तपाईं पृष्ठ विशिष्टता विकल्प छनौट गर्नुहुन्छ, Semalt को DSD ले यसको गहन विश्लेषण गर्नेछ पृष्ठ तपाईंले ड्रप-डाउन मेनूबाट तपाईंको छनौटको चेक खोजी ईन्जिन विकल्प प्रयोग गरेर यूआरएल बारमा राख्नुभयो।
वेबसाइट जाँचले तपाईंको गृह पृष्ठ अन्तर्गत सबै पृष्ठहरूको ब्रेकडाउन गर्दछ र उनीहरूको स्कोरहरू "TOPS मा कुञ्जी शब्द" मा विच्छेद गर्दछ।
उनीहरूको वेबसाइटमा धेरै वेबपेजहरू भएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि, पृष्ठ विशिष्टताको जाँचको विपरीत वेबसाइट विशिष्टता जाँच प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ। तर जब तपाईं कुनै विशेष पृष्ठको गहन विश्लेषण चाहनुहुन्छ, वेबपृष्ठ विशिष्टता रुचाइएको विकल्प हो। पृष्ठ अद्वितीयता जाँच प्रयोगले तपाईंलाई १०० को प्रतिशतको प्रतिशत स्कोर दिन्छ र खोजी पृष्ठको इन्जिन क्रल गरिरहेको छ कि अन्य पृष्ठमा कसरी एक विशिष्ट पृष्ठ समान छ एक प्रतिशत ब्रेकडाउन।
पृष्ठ गतिले तपाइँलाई बताउँदछ कि तपाइँको पृष्ठलाई डेस्कटप वा मोबाइल उपकरणबाट डाउनलोड गर्न कति चाँडो लिन्छ। पृष्ठले तपाईंको नतिजा लोड भएपछि, यसले तपाईंलाई स्कोर दिनेछ र तपाईंको वेबसाइटमा रहेका त्रुटिहरू ठीक गर्ने तरिका कसरी देखाउँदछ। जे होस्, सबै कुरा रंग कोडित छ, ताकि तपाई सजीलो मुद्दाहरु को लागी देख्न सक्नुहुनेछ। हरियोको मतलब यो छ कि त्यहाँ कुनै मुद्दा छैन, सुन्तलाको अर्थ त्यो हो कि तपाइँको वेबसाइट त्यस क्षेत्रमा औसत छ, र रातोको मतलब तपाईले यो मुद्दा जति सक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्नेछ।
जब तपाईं स्कोरलाई हेर्नुहुन्छ - 90-100 हरियो छ, -०-89 50 सुन्तला रंगको छ, र ०--4-4 रातो छ।
जब तपाईं त्रुटिहरू हेर्न तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रत्येक वस्तुको छेउमा रंगीन थोप्लाहरू हुन्छन्। ती थोप्लाहरूको र्गले संकेत गर्नु पर्दछ कि तपाईले के हेर्नु पर्छ।
हाम्रो एबीसी स्क्रिन क्याप उदाहरणमा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूसँग कम्तिमा पाँच रातो वस्तुहरू छन्:
एक कुशल क्यास नीतिको साथ स्थिर सम्पत्ति सेवा गर्नुहोस्।
भारी नेटवर्क पेलोडहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
न्यूनतम मुख्य-थ्रेड कार्य
जाभास्क्रिप्ट कार्यान्वयन समय कम गर्नुहोस्
अत्यधिक DOM आकारलाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
यी पाँचै आईटमहरूमा ड्रप-डाउन मेनू छ जसले तपाईंलाई यो कुरा ठीक गर्न सक्दछ जहाँ "थप सिक्नुहोस् लिंक" को साथ यो मुद्दा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं यो मुद्दा कसरी मिलाउने भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ।
र अन्तमा, रिपोर्ट केन्द्रले तपाईंलाई रिपोर्टहरूको पीढी सिर्जना गर्न र स्वचालित रूपमा मद्दत गर्दछ। ड्रप-डाउन मेनूमा त्यहाँ पाँच ट्याबहरू छन्:
वितरण तालिका सिर्जना गर्नुहोस्
वितरण वितरण तालिका रिपोर्ट गर्नुहोस्
सेतो लेबल टेम्पलेट
रिपोर्ट सिर्जना गर्नुहोस् केवल घटनाको रिपोर्ट सिर्जना गर्दछ, डेलिभरी तालिका सिर्जना गर्नुहोस् तपाईले प्रविष्ट गरेको मितिमा रिपोर्ट स्वचालित हुन्छ, रिपोर्ट वितरण तालिकाले स्वचालित तवरले रिपोर्ट तयार पार्नेछ, र व्हाइट लेबल टेम्प्लेट र डेलिभरी टेम्प्लेटले तपाईंको ब्रान्डको आधारमा रिपोर्टहरू अनुकूलित गर्दछ। ।
ओह, र केवल केसमा तपाईंलाई केही थप मद्दत चाहिन्छ भने, प्रत्येक पृष्ठसँग पृष्ठको दायाँपट्टि "खुला मार्गनिर्देशन" बटन छ जुन तपाईंलाई सबै कुरामा हिंड्ने छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ध्यान दिनुहोस्, जबकि, त्यो बटन प्रति पृष्ठ एक पटक मात्र उपलब्ध हुन्छ।
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको साथ, तपाईं चाँडै केहि हिचकीको साथ तपाईंको SEO व्यवसाय सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। न केवल तपाइँ उब्रोसगेस्ट र आहरेफको समान गुण प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर तपाइँ यसलाई एक कम कम मूल्यमा पाउनुहुनेछ - प्रति डोमेन $ १०! सबै मद्दत बटनहरू र द्रुत ग्राहक सेवा बीचमा, तपाईंसँग सबै उपकरणहरू हुनेछन् जुन तपाईंलाई उच्च SERP स्कोर प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ, त्यसैले तपाईंको वेबसाइट तपाईंको सबै कुञ्जीशब्दहरूमा टाप्स हुनेछ। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ ?? तपाईंको बनाउनुहोस् समर्पित SEO ड्यासबोर्ड आज खाता।